Umthandazo wothando ukuba ubuye. ? [Iyasebenza kwaye Inamandla]
Umthandazo wokucela uthando. Ukwaphulwa kobudlelwane kuhlala kunzima kakhulu ukuboyisa. Eli xesha lizisa usizi kunye nentlungu. Iqhelekile into yokuba xa umhla okanye umtshato uphela ngokulwa sisidenge, umona okanye into, kunokuba nzima ngakumbi ukuqhubeka. Yenza enye umthandazo wothando lubuyise Kungayinto entle ukuba wena kunye nomntu wakho omthandayo ninethuba elinye!
Kubalulekile ukulandela isithandwa sakho ukuba ucinga ukuba ukungaboni ngasonye kwakungekho ngokwaneleyo ukuphelisa ubudlelwane. Ke ukuba uyamthanda kwaye uzimisele ukuphinda ayifumane loo bhondi, ke kufuneka uxolele okanye wamkele iimpawu ezithile zeqabane lakho. Jonga ii umthandazo wokuba uthando lubuyiseKodwa khumbula: akufanelekanga ukuba uyeke ubomi bakho ukuze uthandane. Ukuba awusazimiselanga ukubuyela umva, funda ukuqhubeka.
1 Umthandazo wokuba uthando lubuyise eSan Antonio
2 Umthandazo wothando lubuyisela iingelosi
3 Umthandazo wokuba uthando lubuyise eSan José
Umthandazo wokuba uthando lubuyise eSan Antonio
“U-Saint Anthony wam, olukhathaleleyo ulonwabo lomntu, ngothando, ndiyakucela ukuba wenze (igama langaphambili) undithande kakhulu. Makhe eze kum xa imifuno yasendle ifikelela kunyawo lomnqamlezo. Uzakundinika yonke into, akhonto azondifihlela yona, akazundikhanyela nto kwaye uyakuhlala ethembekile. Elo (igama langaphambili) lize kundifumana. Ngamana ungangabikho umzuzwana woxolo ebomini bakho ngelixa ukude nam ukusukela ngalo mzuzu uye phambili! Amen "
Umthandazo wothando lubuyisela iingelosi
“UMichael oNgcwele, uSanta Raphael kunye noGabriel oNgcwele, iingelosi ezinamandla zaseMazulwini, ndiyibeka entliziyweni yam uthando phambi koncedo lwakho olungcwele, ndicela ukuba uye entliziyweni (igama lothando lwakho) uyichukumise ngesisa, usenza nakuphi na ukuthandabuza kuphele kulo. Malunga nothando endivayo.
Ndicela iingelosi ezingcwele ukuba zikusikelele kuzo zonke iimfuno ojamelana nazo ngoku kwaye uqonde ixabiso loko likho phakathi kwethu kwaye unditsalele umnxeba ngoku, siqonda ukuba sikunye, sisikelelekile kukukhanya kwabo.
Ndiyathandaza, ziingelosi ezingcwele, ukuba siwuthobele uthando lwethu ngonaphakade nangonaphakade, sisuse kuthi onke amandla angalunganga, zonke iingcinga ezimbi, onke amandla obubi, konke ukungavisisani kunye nokungaqondi.
Ndiyakucela ukuba ubhekise kwiNkosi esikelelekileyo uYesu Krestu, kuBawo wethu ongunaNaphakade, isicelo sam esinyanisekayo sokuxolelwa zonke izono esizenzileyo, sibeka ubudlelwane nothando lwethu kwinkonzo yeDivity.
Ndiyanicela, iiNgelosi eziNgcwele, ukuba ninxibelelane ningelosi endigada ngayo kunye nongugada wengelosi (igama lothando) ngalo mzuzu ukuze badibanise amandla abanawo okusikelela umanyano lwethu.
UMichael oNgcwele, uSanta Raphael kunye noGabriel oNgcwele, iingelosi ezingcwele zeZulu, ndiyakucela ngoku, ngentliziyo yam evulekileyo phambi kwakho, ukuba (igama lothando lwakho) ungandifuna ngalo mzuzu, ukutyhila ukuba uBabalo lwaKho undichukumisile.
Kuwe, zingelosi ezingcwele, ukuba ndiyabona ukuba imithandazo yam iyaphendulwa, ndiza kunikezela konke ukuzinikela kwam, ukuze iintsikelelo kubudlelwane bethu nothando ziqhubeke. »
Umthandazo wokuba uthando lubuyise eSan José
“Thina, uYosefu oMnyama, sibuyele kwimbandezelo yethu, kwaye emva kokuba sithandazile sicela Uncedo lwale nkosikazi yaYena Ungcwele ngokuzithemba, sicela inkxaso yakho.
Ngalo mxokelelwane ungcwele wothando oludibanisayo kunye noMama oManyala ongekho mthethweni ka-Thixo, nangokuthanda kothando onalo kuMntwana onguYesu, sikucela ngokunyaniseka ukuba ujonge ngelifa elilungileyo kwilifa lelo uloyise uYesu Krestu njengegazi lakhe, nokusinceda. , kwiimfuno zethu, ngoncedo lwakho namandla.
Khusela, oh umphambili woSapho oluNgcwele, ugqatso olukhethiweyo lukaYesu Kristu;
Suka kuthi, Bawo onothando olukhulu, isibetho sempazamo kunye nesenzo esibi;
Sincede sivela phezulu ezulwini, ewe inkxaso yethu yamandla, kumlo wokulwa namandla obumnyama;
Kwaye njengokuba ubusindisile ubomi obusongelweyo bomntwana uYesu ukufa, ngoku ikhusela iBandla eliNgcwele likaThixo kwimigibe yeentshaba zalo nakubo bonke ubunzima.
Xhasa ngamnye kuthi ngokubambelela kuye rhoqo, ukuze, ngomzekelo wakhe, kwaye sixhaswe ngoncedo lwakhe, siphile kamnandi, ndife ngokuhlonela uThixo kwaye sifumane ulonwabo lwanaphakade ezulwini.
Ingcebiso eyongezelelweyo: Ngamanye amaxesha abantu bacinga ukuba umthandazo awonelanga. Ke jonga uvelwano lweapile kwaye ubuyisele othandekayo wakho.
Qala ngokuthatha i-apile kwaye ususe isiciko (icandelo leklabishi kunye nenxalenye ye crumb). Kwiphepha elibomvu lesikwere, bhala igama lomntu othandekayo kwaye ulibeka ngaphakathi kwiapile ngobusi obuninzi. Ngcwaba egadini okanye embizeni kunye namanzi amancinci kangangeentsuku ezisixhenxe.
Emva koko jonga igadi okanye imbiza ngothando oluninzi kunye nethemba lokuba iindaba ezimnandi ziza kungekudala.
Ngoku uyayazi umthandazo wothando lubuyise Njani ngokufunda ezinye izivakalisi ukuphucula ubudlelwane? Jonga ezinye izicatshulwa ezingezantsi: